I-China Autoclave nabakhiqizi Boiler kanye nabahlinzeki | Izindandatho Ezimbili
Uhlelo lwe-autoclave Double Rings olukhiqizwayo ludonsa izinzuzo zemikhiqizo efanayo yangaphandle kusuka entuthukweni. Izingcindezi zokucindezela okukhulu kwezingcindezi zokuhlaziywa kwengxenye yokuhlolwa kanye nokuhlolwa okuhlukahlukene kokucindezela, kuthuthukisile ukubalwa kwamandla.
Isicelo: I-Flyash Block Plant, i-wokwakha, isitshalo se-AAC,
I-Autoclave-Edumile esetshenziswe ku-ACC Plant, eFlyash Plant, ekwakheni impahla njll.
1, ukukhiqizwa kokuqala kwasekhaya kwefekthri yefektri yobuchwepheshe.
2, ukukhiqizwa komugqa womhlangano, ukushisela konke okuzenzakalelayo, ikhwalithi nokuqina.
I-3, zonke izingxenye zokucindezela kwe-100% ye-X-ray yokutholwa kwefilimu, izindlela zokutholwa eziphambili.
I-4, umkhiqizo njengemboni yonke, isakhiwo esithuthukile nesifanele, isikhathi esifushane sokufaka, izindleko zokutshalwa kwemali ziphansi.
I-5, ifakwe ngokuphelele, ngokulawulwa ngesandla noma ngekhompyutha.
Imishini yokuphulukisa umusi we-Autoclave enkulu, ingasetshenziselwa izitini zesihlabathi eziphulukiswe ngomphunga, izitini zomlotha ezindizayo, amabhlogo kakhonkolo aphakeme, isigxobo sikakhonkolo esinamandla amakhulu, ipayipi neminye imikhiqizo kakhonkolo, kodwa futhi nokhuni, umuthi, imboni yamakhemikhali, ingilazi, izinto zokufakelwa kanye nezinye izimboni.
ImodeliInto FGZCS1.0-1.65x21 FGZCS1.3-2x21 FGZCS1.3-2x22 FGZCS1.3-2x26 FGZCS1.3-2x27.5 FGZCS1.3-2x30
Ingcindezi Yomklamo Mpa
Izinga Lokushisa ℃
Umsebenzi wokushisa ℃
I-Steam egcwele, amanzi afingqiwe
Ngaphakathi Ibanga lesitimela mm
IVolumu Ephumelelayo m3
Isisindo Esiphelele Kg
Sekukonke Isilinganiso mm
ImodeliInto FGZCS1.5-2.68x22.5 FGZCS1.5-2.68x26 FGZCS1.5-2.68x39 FGZCS1.5-2.85x21 FGZCS1.5-2.85x23
ImodeliInto FGZCS1.5-2.85x24 FGZCS1.5-2.85x25 FGZCS1.5-2.85x26 FGZCS1.5-2.85x26.5 FGZCS1.5-2.85x27
ImodeliInto FGZCS1.5-2.85x29 FGZCS1.5-2.85x36 FGZCS1.5-3x23 FGZCS1.5-3x31 FGZCS1.5-3.2x24.5
Isisindo Esiphelele Kg 58400
Sekukonke Isilinganiso mm 30634x3640x4495 37634x3462x4495 24875x3516x4804 32875x3516x4804 26570x3750x5027
Esedlule: I-AAC Autoclave neBoiler
Olandelayo: I-SZS Fulverised Coal Steam Boiler Amanzi abilayo amanzi
Ukuthengisa okuzenzakalelayo kuyathengiswa
ukushisa kwe-autoclave inzalo
isigaba b autoclave
Isingeniso: SZS uchungechunge kubhayela umzimba longitudinal 2-isigubhu, D-uhlobo ekamelweni omlilo strueture. Isithando somlilo sisohlangothini lwesokunene kanti ishubhu yasebhange le-convection lingakwesokunxele. Umzimba ususelwa ku-chassis yomzimba ngokusekelwa okuguqukayo phakathi nendawo kanye neziphetho ezimbili zesigubhu esingaphansi, kungavikela ukuvumela wonke umzimba we-boiler ukwanda eceleni kwendlela. Isithando somlilo esizungezile kunesikhala esincane sesikhala sokupholisa ithubhu lodonga. It is ngokuphelele uphawu futhi ihlukaniswe phakathi udonga ulwelwesi ohlangothini lwesobunxele kwesokunxele kanye c ...